netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:ဖုန်းများ
Remax Classic Earphone RM-711
-14.2mm Bass Driven Speaker ရဲ့ အံ့မခန်းအသံထွက်နဲ့အတူ နားထဲ အလိုက်သင့်နေရာယူထားတဲ့ သက်တောင့်သက်သာ အရှိဆုံး နားကြပ်အုံ ဒီဇိုင်းက ပြောစရာကို မရှိအောင် အပြစ်ကင်းလှပါတယ်..
-MFB Button ခေါ် သီချင်းဖွင့်ပိတ် /ဖုန်းကိုင်ဖုန်းချ /သီချင်း အပုဒ်ကျော် အကုန် လုပ်လို့ ရတဲ့ ခလုတ်နဲ့ အသံအတိုးအချဲ့ထိန်းဖို့ Slide Button တစ်ခု ပါတာကလည်း တကယ် မက်လောက်စရာပါပဲနော်
-တစ်ဘက်လူက ဖုန်းပြောနေရင်တောင် "ငါ့ဘေးရောက်နေတာလား" လို့ ပြန်မေးတာက သူ့ရဲ့ Noise Reducing Microphone အစွမ်းပေါ့
Rock Space Wireless Charging Power Bank P38
Wireless System ပါဝင်တဲ့ မည်သည့်ဖုန်းမဆို အလွယ်တကူ Wireless Charging Power Bank ပေါ်တင်၍အားသွင်းနိုင်ပါတယ်။
LED indicator ဖြင့် Wireless Charging Power Bank အားပမာဏ ကို ဖော်ပြပေးတဲ့ Digital Display ပါဝင်ပါတယ်။
-Wireless system ဖုန်းနဲ့အားသွင်းရင်းတစ်ပြိုင်နက် အခြား ဖုန်းတစ်လုံးကို သာမန် Power Bank အားသွင်းသလိုမျိုး Output Cable ဖြင့်ထပ်အားသွင်းထားနိုင်ပါတယ်။
-Safe IC Protections အဆင့်ဆင့်တွေဖြစ်တဲ့ Overcharge , Over Current & Short - Circuit , Input Over Voltage , Output Over Current , Reverse Charging စသဖြင့် Protection တွေပါဝင်တာကြောင့် Safety အတွက်စိတ်ချရပါတယ်။
-10mm Dynamic Speaker နဲ့Hi-Fi စနစ် နဲ့ဆိုတော့ အသံပိုင်ဆိုင်ရာအလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ်
-သေးငယ်ပြီးပေါ့ပါးသောပုံစံကြောင့်တခြားHead Set တွေလိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ထာလျှင်နားနာကျင်ခြင်းကိုမဖြစ်စေပါဘူး
-ဖုန်းနှစ်လုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်း ချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ Multiple Connection Function ကိုကြည်လင်ပြတ်သားသော အသံဖော်ဆောင်ပေးတဲ့HD Microphone နဲ့ Multifunction Buttom သုံးမျိုးပေါင်းစပ်ပေးထားပါတယ်။
-Bluetooth Version 4.2 ဆိုတော့ Battery အစားသက်သာ ၁ နာရီခွဲ အားသွင်းထားပီး ၃ နာရီ ဖုန်းပြောနိုင်ကာStand by နာရီပေါင်း ၄၈ နာရီ အသင့် ဘာမှ မလိုတော့ပါဘူး။
-အာမခံ ၆လ ပါရှိပါသည်။
-Bluetooth နားကြပ်​​​​တွေကို နောက်ဆုံး TWS နည်းပညာ Twin Wireless Systemပြုလုပ်ထားတဲ့ REMAX (TWS-1) လေးပါ။
-နားကြပ် အသေးလေးတွေ battery 40mah နားကြပ်လေးတွေ ကို အရေးပေါ်အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ ဗူးလေးက 500mah ဆိုတော့ လုံးဝ အဆင်ပြေပါသည်။
-တခါ အားအပြည့်သွင်းထားရင် ၃နာရီ အသုံးပြုနိုင်ပီး အားသွင်းဗူးလေးက လဲ ၃ကြိမ် ပြန်ဖြည့်နိုင်ပါသည်။
-EDM Songs တွေနားထောင်လိုက်ရင် ထူးခြားမှုကို သိလိမ့်မယ်
-Beat သံအလိုက် တုန်ခါနေပြီး Hi-Fi စနစ်အပြင် Noise-Cancellation ဒီဇိုင်းဆိုတော့ လုံးဝ Perfect
-တပ်ထားလိုက်ရင် နားကြပ်က သီချင်းသံပြင်ပကို လုံးဝ Leak မဖြစ်တဲ့အပြင် Gaming အတွက် အထူး ရည်ရွယ်ထားတာမို့Gamer တွေတော့ ကြိုက်မှာ အသေအချာပါပဲ
-ကြိုးသားက ပိုးကြိုး နားမနာအောင် အစွပ် ၃ မျိုး ရွေးနိုင်မယ့်အပြင် အရောင်ကလဲ Crazy Red နဲ့ Mate Black တကယ့် ရှိုးပွဲ ထဲရောက်နေတဲ့အတိုင်း HD Stereo Sound နဲ့ လွင့်မျောရမှာပါနော်
WK SHANGPIN Series 10000mAh Power Bank
-Input -5V / 2.0A
-Output -5V / 2.0A
-Capacity - 10000 mAh
Yunteng Mini Tripod Code:VCT-5208
-Suitable for SLR’s, Digicams, Action Cameras, comes with Cellphone Holder and Bluetooth Remote Shutter for Smartphones
-Maximum height - 125cm
-With bluetooth remote shutter for smartphones
-Compatible with Android and IOS Devices
Yunteng Mini Tripod Code:VCT-1688
-Material: High-strength aviation aluminum alloy
-Folded Height: 31.5cm / 12.4in
-Max. Working Height: 134cm / 52.8in
Yunteng Mini Tripod Code:YT-9928
-Material: Aluminum Alloy + Plastic
-Folding Length: 22cm / 8.7in
-Max. Usage Length: 96cm / 37.8in
-Max. Load Capacity: 0.22kg / 7.8oz
-Item Weight: 200g / 7oz
-Package Size: 21.5 * 6.5 * 5.5cm / 8.5 * 2.6 * 2.2in
-Package Weight: 275g / 9.7oz
Yunteng Mini Tripod Code:YT-228
-Mini tripod, compact and lightweight, easy and convenient to carry
-Anti-skid silicone foot pad
-Holding action camera / cellphone / digital camera steady
-With cellphone clip holder for selfie stick use
-Foam and silicone pad on the clip, without scratching your cellphone
-Can be used as selfie stick when folded
-Suitable for action cameras such as GoPro / SJCAM / Xiaomi Yi, etc.
-Cellphone clip width ranging5- 8cm, fit for smart phones such as iPhone / Samsung / HTC, etc.
-A great tripod for your action camera / digital camera / cellphone
Remax Wireless Powerbank Cover For I Phone X
5V/1AOutputဆိုတော့အရေးပေါ်ဖုန်းအားဖြည့်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေစေပြီးအားသွင်းရင်းသီချင်းနာထောင်မရတဲ့ ပြသနာလည်းအဆင်ပြေစေမှာပါ။ဒီဇိုင်းက ၂ မျိုးရှ်ိပါတယ်ရှင့်
Min: 2,000(Ks) Max: 1,275,000(Ks)
All Accessories Bluetooth Earphone Bluetooth Headset Cable Card Reader Controller Headphone Holder Micro SD Card OTG Phone Power Bank Selfie Sticks & Set Socket Speakers Studio Set Tripod USB USB Charger USB Flash Drive VR Glass ဖုန်းကာဗာများ အသစ်အဆန်းများ Car Accessories Earphones
All 53 Mobile Asus J-Meister K World Karmart KingCom Myanmar Oppo Power Plus QCY Remax Rock Space Samsung Silicon Power Teclast Toshiba Kyaw Win Transcend WK Xiaomi Yunteng
All Beauty Electronic အခြားပစ္စည်းများ အိတ်များ
All ငွေရောင် Black အနက်ရောင် အဖြူရောင် ရွှေရောင် Gold Silver Grey White Yellow Pink Blue White+Pink White+Blue White+Green Black+Gold Red Green Khaki Gray Brown Black + Gold White + Silver Rose Gold White + Pink White + Blue Black + Yellow Orange White&Black White&Grey Lt.green Purple Dk.green Maple Gold Midnight Black Orchid Gray Tarnish Black (EKS21) Green (EKS22) Red (EKS23) Silver (EKS24) Black (EKZ01) Blue (EKZ02) Red (EKZ03) White (EKZ04) Yellow (EKZ05) Gold (PKA11) Grey (PKA12) Silver (PKA13) Gold (PKA21) Silver (PKA22) Gold (PK31) Silver (PKA32) Black (PKD11) Blue (PKD12) Green (PKD13) Pink (PKD14) White (PKD15) Yellow (PKD16) Black (PKD21) Blue (PKD22) White (PKD23) Blue (PKD01) Green (PKD02) Yellow (PKD03) Clear Rose Black+White Dark Grey + Green Dark Grey + Red Light Grey + Tarnish Dark Grey + Blue White + Dark Grey white + gold white + rose gold trans-black trans-pink trans-green trans-white Mint transparent Jet Black Navy Blue champagne gold Iron Grey Rose Red Mint Green Deep tarnish Yellow Green trans-gold trans-blue transparent new Rose Pink Tranish BY-001 BY-002 BY-003 BY-004 BY-005 Diamond Silver
All 32GB 64GB TK-001 TK-002 TK-003 TK-004 SC-001 SC-002 SC-003 SC-004 SC-005 SC-006 SC-011 SC-012 SC-013 SC-014 SC-015 SC-016 SC-017 SC-018 iPhone6iPhone 6s iPhone 6s Plus Micro USB iPhone USB iPhone6Plus iPhone7iPhone7Plus iPhone 8 Lovely rabbit Meng rabbit Black Cat Pink Panda Greedy Panda
All 16GB 32GB iPhone6iPhone6Plus IPhone7IPhone7Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus
All Remax Oppo Silicon Power SAMSUNG Asus Huawai Rock K World KingCom Myanmar Transcend WK XIAOMI Power Plus Karmart J-Meister Yunteng QCY